Mifandraisa: ampitomboina ny ROI an'ny tamba-jotra | Martech Zone
Alatsinainy 24 Febroary 2014 Douglas Karr
Ny fitantanana ny fifandraisana amin'ireo vinavinanao sy ny mpanjifanao no ankamaroan'ny ady amin'ny resaka fitazonana sy fahazoana izany. Na dia mahafinaritra aza ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola ho an'ny mpanjifanay, manampy azy ireo amin'ny idealy, torohevitra amin'ny sehatra, ary na dia mpampifandray ny vaovaon'ny indostria aza, ny fikarohana amin'ny fifaninanana, ny mpivarotra sy ny mpangataka asa dia matetika no manan-danja sy sarobidy amin'izy ireo ihany koa.
Ny CRM mahazatra dia manana ny fahaizana mandray an-tsoratra ny tarehin-tariby ataon'ny ekipanao - fa tsy voatery hitondra ilay trano mahavelona azy. Tanjona mifandraika amin'ny fanampiana ireo orinasa hanaraka ny olona mety, amin'ny fotoana mety, hampitomboana ny fifandraisana ROI amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fitanana, ny fahazoana ary ny teboka mikasika izany.
Endri-javatra momba ny fifandraisana
Dashboard - Tantano ary araho ny hetsika fananganana ny fifandraisanao rehetra ary jereo ny fampahatsiahivanao sy ny fihetsika ataonao isan'andro ary fantaro tsara hoe iza no tokony harahinao isan'andro. Araho ny fandrosoan'ny fifandraisanao amin'ny statistika isan-kerinandro sy ny naotinao mba hahafantaranao tsara ny toerana misy anao.
Email templates - Ampifanaraho amin'ny alàlan'ny fandefasan-kafatra ny contact-nao amin'ny alàlan'ny modely namboarina ahafahanao mitazona ny hafatrao mandaitra indrindra amin'ny fotoana tokony hanarahana azy. Ny saha mavitrika dia ahafahan'ny môdely mametraka ny hafatrao amin'ny alàlan'ny angona manokana momba ny mpandray anao.
Fizarana lahatsoratra - Ampiasao ny lanja amin'ny fizarana lahatsoratra amin'ny alàlan'ny fitaovana Fifandraisana ao anaty-fitetezana mba hikarakara lahatsoratra, horonan-tsary, lahatsoratra bilaogy ary tranokala hafa ao amin'ny tamba-jotra misy hafatra manokana.
Intro Maker - Manaova fampidiran-dresaka eo amin'ny olona ao amin'ny tambajotrao amin'ny alàlan'ny fandefasana ny famaritana anao sy ny angona fifandraisan'ny tsirairay amin'ireo mpandray roa miaraka.
ScaleMail - Mandefasa hafatra natokana ho an'ny mpifandray voafantina 250 amin'ny alàlan'ny saha maodelim-bahoaka. Alohan'ny handefasana dia azonao atao ny manampy naoty tsirairay ao amin'ny mailaka tsirairay raha mikasika anao manokana.
Programs - mamela anao hametraka andiana hetsika miaraka amina fifandraisana na vondrona manokana mandritra ny fotoana iray, na mandeha ho azy na miaraka amin'ny fankatoavanao.
fantsona - Alao sary an-tsaina ny fifanarahana nataonao ary ataovy lohalaharana ny ezaka ataonao amin'ny alàlan'ny fampisehoana izay tetikasa misy ny fantsom-pahefana azonao. Ny fitaovana dia ahafahanao maka sary an-tsaina ny fifanarahana nataonao hatramin'ny misokatra ka hatramin'ny farany araka ny dingana namboarinao, ary mampiseho izay fifampiraharahana mety hianjera amin'ireo triatra.
Contact management - Rehefa misoratra anarana amin'ny fifandraisana ianao dia hampifandray mivantana ny mailakao, ny mombamomba ny media sosialy ary ny finday avo lenta amin'ny sehatra misy anay. Io dia ahafahanao mifandray amin'ny famoronana ho azy ny data-data ho anao raha tsy misy fidiran'ny tanana eo anilanao.
Hetsiky ny ekipa - Araho maso ny fandrosoan'ny isam-batan'olona sy ny ekipanao raha ny amin'ny fifandraisana amin'ny fitantanana. Jereo hoe firy ny fifandraisana zarain'ny mpiara-miasa tsirairay ary firy amin'izy ireo no nifandray tamin'ity herinandro ity.
Fanendrena ekipa - manendre fifandraisana amin'ireo mpiara-miasa aminao ary izy irery ihany no hahazo fampandrenesana fanarahana an'io fifandraisana io, mamorona fifandraisan'ny tena fifandraisana.
Mizara siny - Ampifandraiso am-pahamendrehana ireo siny manokana amin'ny sotron'ny ekipanao mba ho zava-baovao hatrany ny firaketana ny fifandraisana.
Tags: mifandrayCRMdomanao crmGoogle +Highrisemikolokolosalesforceteboka mikasika
Ny mety ho varotra sosialy an'ny Snapchat
24 Feb 2014 tamin'ny 10:06 maraina
Lahatsoratra tsara, Douglas! Ary misaotra anao nanokana fotoana hanoratana an'ity!